Shina mitarika lakilasy vita an-tsambo, lakilasy vita amin'ny ivelany ho an'ny fananganana, Fampisehoana rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina, mpanamboatra tady vita amin'ny baiko.
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Led Curtain Display,Curtain Led Led labas ho an'ny fananganana,Led Curtain Wall Show,Curtain Led,,
Home > Products > Transparent LED fampisehoana
Transparent LED fampisehoana
Ny vokatra avy amin'ny Transparent LED fampisehoana , mpanofana manokana avy any Shina, Led Curtain Display , Curtain Led Led labas ho an'ny fananganana mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Led Curtain Wall Show R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Shina Transparent LED fampisehoana mpamatsy
Transparent LED efijery fampisehoana
Ny fampisehoana Transparent Led dia famolavolana mamorona sy fanatsarana ireo efijery fampiratiana ivelany. Izy io dia vita amin'ny tsipika DIP Led.
ny vokatra dia manana endri-javatra maivana, famokarana angovo, fangaraharana avo, fametrahana haingana ary fikojakojana mora. Miaraka amin'ny diode ambony sy avo lenta amin'ny dioda fitarihana, ny fampisehoana LED mangarahara ivelany an'ny Priva Led dia manana fanjifana herinaratra ambany ary avo lenta. Amin'izany fomba izany, dia tena maharitra sy maharitra mandritra ny androm-piainany.
Ho an'ny fahazoana tsara kokoa, Led efitra fisehoana tombony lehibe indrindra,
Ny mari-pahaizana ambony amin'ny rano dia ampiharina amin'ny fenitra IP65 porofon'ny rano, amboary tsara ny efijery raha tsy misy olana na dia amin'ny orana be aza.
Ny kabinetra mavesatra maivana Ny kabinetra dia 5-8 KG isaky ny metatra toradroa, 60% latsaka ny lanja raha oharina amin'ireo tsipika nentim-paharazana ary mampihena be ny tsindry mavesatra amin'ny firafitra.
Ny volan'ny fangaraharana avo indrindra amin'ny famoronana Louver, ataovy ny tahan'ny fangaraharana hatramin'ny 72%, ary io famolavolana io dia tena feno fahafaham-po ny olona mahita ny any ivelany.
Famirapiratra avo ho an'ny P25, dia azo ampiasaina tanteraka amin'ny ety ivelany ambanin'ny tara-masoandro matanjaka.
Fametrahana haingana sy malefaka Tsy mila firafitra vy, Fomba tsotra sy tsotra fanangonana, ataovy haingana sy mora ny fametrahana sy ny fikojakojana. Miorina mafy izany na dia amin'ny rivotra mahery aza.
1 Mametaka ny rafitry ny vy: mametaka azy amin'ny rindrina mafy
2 Ampidiro tsara amin'ny firafitra ilay U-Tile
3Afohao amin'ny alàlan'ny kofehy ilay rindrina
4Izay ny fantsom-baravarana havanana an-kavanana mankany amin'ny slot an'ny karatra U-tile Frame havanana.
Afafazo ny sisin'ny sisin'ny ankavia ho any amin'ny lavaka misy eo amin'ny sisiny havia amin'ny rindrina U-tile
6 Tanjona amin'ny lavaka skoto ho an'ny fametrahana serivisy eo alohan'ny fidirana amin'ny serivisy, mametaka kofehy 6 amin'ny rindrina U-tile amin'ny alàlan'ny kabinetra avy eo anoloana.
(Ity dia paik'ady amin'ny serivisy, alàlan'ny fanampiana ity kabinetra ity ho an'ny fikolokoloana aoriana)
7 Ary vita ny fametrahana ho an'ny kabinetra iray. Toy izany koa ny amin'ny birao manaraka.
Ampifandraiso amin'ny fantsom-baravarankely manaraka ny tarika lahy-lahy (miaraka amin'ny tariby) amin'ny fantsom-behivavy ao amin'ny kabinetra ambony.
9 Mampiasa ny fomba mitovy mba hamaranana ny fifandraisana sisa (tariby dimy tariby), dia vita ny asa fametrahana hametrahana LED feno.
Aorian'ny famarotana ny fikojakojana
1 Ny kabinetra dia manohana ny fikolokoloana fitsangatsanganana tokana. Raha misy jiro LED ratsy na fanimbana amin'ny tsipika tokana dia azonao atao ny manala ilay fantsana misintona tsy misy maka ny kabinetra sy ny boaty fanaraha-maso.
2, Kabinetra manohana ny fametrahana & fanarenana miverina aoriana. Raha misy olana amin'ny kabinetra tokana, azonao atao ny manala ny kabinetra amin'ny eo alohan'ny & aoriana ao amin'ny efijery.
3, Raha misy fahasimbana amin'ny boaty fanaraha-maso, mila manaisotra ny kabinetra ianao ary sokafy ny fonon'ny boaty famatsiana herinaratra mba hanaovana asa fanarenana sy fifanakalozana.
Fonosana: raharaha vita amin'ny kitay 1 ho an'ny kabine ho an'ny tendron'ny 10 mitarika.
Ity vokatra andian-tsarimihetsika LED LED Strip ivelany ity dia ampiasaina betsaka amin'ny tranoben'ny tarehy, ao ambadiky ny rindrin'ny fitaratra, eo anoloan'ny rindrina fitaratra, nitarika takelaka sy famantarana ary eo an-tampon'ny trano.
Tongasoa eto mitsidika ny orinasa eto Nansha Guangzhou China. Azafady mba mifandraisa aminay raha misy fanontaniana na fanontaniana!
Fantsom-baravarankely naseho fitaratra
Ny fanamafisana Pixel
Fanapahan-kevitra ny maody
Ny haben'ny kabinetra (l * h * t)
Ny lanjan'ny kabinetra
Fomba entina mitondra fiara
Zoro tsara indrindra mijery
Fanjifana fahefana amin'ny herinaratra
Freaky ny frame
Hafa famerenana indray
Fanaraha-maso ny hazavana
Curtain Led Led labas ho an'ny fananganana
Led Curtain Wall Show